Yan Aung: တဒင်္ဂအလွမ်းများ
No .1 !
Kan yo !
ta kal ko kg par tal...
သြော်..မွ..မွ..မွ... အဲ.. မှားလို့ မ..မ ..မး)))
pYAe SonE hEIn said...
မိုက်၏ . .မိုက်၏ ;P
ကျနော် ကိုရန်အောင်ရဲ့ ကဗျာတွေထဲက တချို့စာသားလေးတွေ ကြိုက်လို့ ကျနော် ချစ်တဲ့ သူဆီ ကူးပြီး ပို့ပို့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် ချစ်တဲ့ သူကတော့ မခံစားတတ်ဘူး။ ကျနော် ကတော့ ကိုရန်အောင် ကဗျာတွေ ဖတ်ပြီး ငိုဘဲငိုချင် နေမိတာ ။
ထာဝရဆိုတာ အစက ဖိနပ်ဆိုင် ထင်တာ
ခုမှပဲ အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ တဒင်္ဂလေးတွေမှန်း
သိတော့တယ် .. ရေခဲငှက်က ရေခဲတွေကြားမှာသာ နေတာ ကဗျာတွေကျတော့ အလွမ်းတွေနဲ့ တငွေ့ငွေ့ပဲ သနားပါတယ်..း)း)
(မာလာကာပင်လာစိုက်တဲ့သူကို မာလကာသီး ပြန်လာပေးသွားတာ .. :P )
ငိုချင်တယ် ကိုးနတ်ရှင် အဆက်မပြတ် ဖြစ်ပျက် နေတာကြောင့်လို့ မာပြည်က ယူဆာ တွေလည်း မှတ်ထင်ကြဦးမယ်။
ကဗျာကို တစ်လုံးချင်းဖတ်ပြီး တစိမ့်စိမ့် ခံစားသွားပါတယ် .... စာသားတိုင်းမှာ ရင်ထဲကစကားတွေ မြင်နေရပါတယ်..မွတ်သိပ်စွာ ခံစားရတဲ့ဆန္ဒတွေ ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါစေ။ ကဗျာဆရာရဲ့ ခံစားချက်အတိမ်အနက်ကို စာသားလေးတွေက ဖြည့်ဆည်းဖော်ပြသွားပုံလေးက တကယ်ကို လွမ်းမောဖွယ်ကောင်းပါတယ် ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်.....။